Vokatra mpamokatra - Mpanome vokatra & trano famokarana Shina
Rafitra fanaraha-maso ny fitaovana escalator
Fomba fanaraha-maso elektrika Misy fomba roa. Ny modely voalohany dia modely mahazatra, ary ny fomba faharoa dia ny fomba fikojakojana. Fomba mahazatra izany rehefa ampidirina avokoa ireo fonosana tsy fanamboarana ny efi-trano ambony sy ambany. Ny escalator dia manomboka mividy ny staff misy lakile rehefa tsy misy iray ao. Ny mpiasa dia manindry ny bokotra fijanonana hampijanonana ny escalator. Rehefa voaray ny mari-pahaizana lakile dia manomboka sy haingam-pandeha. Esory ny iray amin'ireo plug tsy fanamboarana ary ampidiro ao anaty boaty ny fanamboarana ...
Escalator fivarotana fitaovana amin'ny tranokala sary 3
Ny The Basic Principle Escalator dia karazana fitaovana mitohy mitohy izay amina rantsan-tariby manana endrika manokana sy ny fehikibo momba ny rafitra manokana. Manana tombony maro izy toy ny fahaiza-mitondra fitaterana be, ny fitaterana tsy tapaka. Noho izany ny fepetra takian'ny fiarovana dia avo noho ny fitaovana hafa. Ampiasaina amina toerana be olona sy ny fahitana olona be dia be, toy ny toeram-pivarotana fivarotana, fikambanana, seranam-piaramanidina, seranam-piaramanidina sy wharf. Fanamboarana ny fiara vaventy ...